Tani waa hubka qarsoodiga ah ee Netflix ee dagaalka ka dhanka ah Disney iyo Apple - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Tani waa hubka qarsoodiga ah ee Netflix ee dagaalka ka dhanka ah Disney iyo Apple - BGR
Tani waa hubka qarsoodiga ah ee Netflix ee dagaalka ka dhanka ah Disney iyo Apple - BGR
Isbuucaan, taageerayaasha dhaqanka pop ka soo adduunka oo mar kale ay fiiro qaaradda khayaalka ah Westeros, halkaas oo dagaal adag oo sirreyda waayo, xoog wayn dhammaan doontaa oo ugu danbeyn ku soo dejin doonaa taxane khiyaali Tacaddi HBO Game of Thrones sideed sano ka dib markii uu kulankiisii ​​ugu horeysay
Dunida dhabta ah, cutub cusub oo isku mid ah dagaalkii ugu dambeeyay ee ciddii ugu dambeysay ee ku mashquulsanaa muuqaalkii cimilada ee woqooyiga ee The Iron Throne ayaa ku dhow in la bilaabo, hadda in Disney ugu dambeyntii la soo bandhigay oo ah rakaabka Netflix, Disney +, oo uu bilaabi doono Nofeembar dhawr dollar oo ka yar qorshaha ugu jaban ee Netflix.
Aan kor u qaadno. Apple, iyadoo ay mustaqbalka Apple TV + diffuser iyo Disney, wakiil caqabadaha ugu adag in Netflix ayaa marna la kulmay tan iyo markii ay dhacday adeeg ugu horayn si mail bixiyaha content video ah si joogto ah xukuma . Apple iyo Disney waxay sidoo kale ka soo saaraan bog ka socda Netflix Reading Reading iyo iyaga oo ka soo horjeeda iyaga. Waxaad xusuusataan in Netflix ayaa iska daayeen inay noqon bixiyaha content a ugu horayn ay bixiyaan dadka kale oo ay go'aansatay in ay diyaariyaan mustaqbalka by dhismaha maktabadda ah asalka aad u moodada ka badan aad ka heli karto meel kasta oo kale. Apple iyo Disney labadoodaba waxay furan yihiin buug-gacmeedkooda iyo ballanqaadkooda inay isticmaalaan balaayiin doolar oo sameeya wax la mid ah.
Si kastaba ha ahaatee, Netflix ma laha mid ka mid ah shirkadahaas, hub khaas ah haddii aad rabto. Haddaba waxay ahayd Reed Hastings, CEO shirkadda, idinku doono isaga ku saabsan waxa ay, ma aha qof aad rabto in ay wajihi doonaan cavalierly kiiskan iyo u qaadan in aad ka soo bixi doonaan ku guuleystay fudud.
 Ka feker daqiiqad ku saabsan dhammaan qorshooyinka rukumada ee aad u-qorto, laga soo xareeyo naadiyada, wargeysyada iyo joornaalada, Netflix, Hulu iyo kuwo kale. Haddii aan bilaabi karno in la kala saaro kuwa laga yaabo in ay ku dhowaadaan inay ka baxaan ka hor inta aan la dhicin, waxaan dhihi karaa dadka intooda badan, Netflix ayaa ah midka ugu sarreeya liiska, ama xitaa sare. Malaayiin qof oo macaamiisha ah ayaa u maleynayay inay tahay qasab. Apple, Disney iyo dhamaan dadka kale waxay ku jiraan xaalad adag. Sida miisaaniyadaha muwaadiniinta caadiga ah, ma jiraan meelo badan oo lagu daro. rukun cusub "muhiim". Ma qiyaasi karo wax kasta oo ka mid ah dhacdooyinka aan ku deyn lahaa subsphetx - iyo inta badan, waxaad raadin kartaa go'aamadii ka dhashay Reed Hastings 'hoggaanka aragtida ee shirkadda.
Apple iyo Disney tartanku waa kuwo aad u tartan sida waafaqsan shuruucda ciyaaraha fiidiyowga ee ay hadda ku jiraan. Taariikhda inteeda badan, waxaadna rajeyneysaa in aad cafisid sida bayaankani u muuqanayo, laakiin Reed & Co. waxay ciyaarayeen ciyaar ka duwan Netflix. Ha ahan diirada saarin muuqaalka dhulka ka hor, laakiin waxa ay rajeynayaan waxa mustaqbalka ku heysta - iyo si ay u korto in ay kulmaan - ka hor intaanad u baahnayn.
Laga soo bilaabo DVD-yada jirka ah si ay u soo gudbiyaan, illaa asalka dhabta ah, si ay ugu dambeyn soo saaraan sifooyin ay uqaabilnaayeen kuwa naqdiya. Waa sheeko xiiso leh oo la daawado. Tani macnaheedu maaha in dalabaadka rukumashada ahi aysan u qalmin Apple iyo Disney, waxaana doonayaa inaan labadaba tijaabiyo. Laakiin Kierkegaard waxay soo bandhigtay faahfaahin aad u wanaagsan oo ku saabsan sida noloshu u fahmi karto oo keliya dib-u-eegista, laakiin waa in la noolaado mustaqbalka. Waxaan sharad in xaaladaha la joogo, Netflix boqorkii dalka jiirada soo baxna sii ahaan doono ka hor iyo inta badan mustaqbalka dhow, sida qotoda dheer CEO ay weli mas'uul iyo in Netflix sii wadaan in ay sharad si geesinimo leh baahiyihiisa.
Source Source: Alberto Estevez / EPA / Shutterstock
Nin ayaa diyaarad u duulaya guri